Apple iri kutsvaga kuwana mitengo inoderedzwa neApple Music zvinyorwa | IPhone nhau
Ndinofanira kureurura kuti ndakaedza zvakare Apple Music, ino nguva uchibhadhara ... Uye kune zvakawanda hype kuseri kweApple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi, uye hongu, zvinyorwa zvinokochekera asi chokwadi ndechekuti Spotify inotigadzirawo zvakafanana zvinyorwa. Chii chiri chokwadi ndechekuti ini ndawana iyo nyowani Apple Music nhevedzano, Planet yeApplication uye CarPool Karaoke, uye chokwadi ndechekuti ivo vari kuvaraidza asi ini handizive kana ivo vari chikonzero chakaringana kusarudza iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi yevakomana pane iyo block.
Zvisinei, zvinofanirwa kutaurwa izvozvo Apple hapana kana chakaipa chairi kuita iine masevhisi ayo ekumhanyisa, sevhisi ine yakakura zvakanyanya muhuwandu hwevashandisi, uye kubva kwavanotarisira zvimwe zvakawanda. Pasina kupokana izvi zvinosanganisa zvakateedzana zvakagadzirwa naApple muenzaniso uye ndine chokwadi chekuti tichaona zvimwe zvirimo zvekuteerera mukati meApple Music. Uye kuenderera nekudyara muApple Music, Apple inoda kuti izvi zvive zvinobatsira uye sezviri pachena ari kutaura na rekodha makambani kuitira kuti vadzikise mitengo yavo ...
Inofanira kutaurwa kudaro Apple Music ibasa rinobhadhara zvakanyanya kunyora makambani, ndiko kuti, vakomana veApple vawana kusimudzira kukuru kweApple Music nekuda kwekuve iye Anodiwa emakambani ekurekodha kuve iwo wekumhanyisa mimhanzi sevhisi iyo inovapa iwo akanyanya mari mabhenefiti. Kubva payakasvika makore maviri apfuura, Apple Music iri kubhadhara makumi mashanu neshanu muzana yemihoro yemumwe munhu anonyorera kumakambani ekurekodha, chimwe chinhu chakakwira zvakanyanya kupfuura iyo 58 muzana iyo Spotify yakangotaurirana nemakambani ekurekodha.
Asi Apple inoziva inogona kusimbisa nzungu zvishoma, uye sezvo ivo vakakwanisa kuzivikanwa mumakore maviri, ivo vakawana a hombe yekunyorera dziva, ivo vanoda kudzikisa iyo 58 muzana kune manhamba ari padhuze neicho chinobhadharwa naSpotify. Hondo yakavhurika mumusika wekushambadzira mumhanzi uyo pasina mubvunzo uchaenderera uchidhonza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple iri kutsvaga kuwana mitengo yakadzikiswa nemazita eApple Music
Kutsoropodzwa kweCarpool Karaoke kunotanga ... uye hazvina kunaka